नेपालमा रेल जोड्न चीन आतुर, ल्हासाको रेल केरुङनै आइपुगेको छैन काठमाडौंसम्म कहिले आउने ? - Bidur Khabar
नेपालमा रेल जोड्न चीन आतुर, ल्हासाको रेल केरुङनै आइपुगेको छैन काठमाडौंसम्म कहिले आउने ?
विदुर खबर २०७५ भदौ २७ गते ६:१२
नुवाकोट भदौ २७, काठमाडौंमा चिनियाँ रेल कहिले आइपुग्ला भन्ने चासो बढ्दै गर्दा तिब्बती अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् । चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलको पहिलो चरणको अध्ययन गरिसकेको छ ।
ल्हासाको डाँडोमा रेल गुडाइरहेको चीनले पछिल्लो समय काठमाडौंमा रेल ल्याउनेमा नेपाली जति आशावादी छन्, चिनियाँ अधिकारीहरू पनि त्यतिकै उत्साही सुनिए । उनले थपे, ‘तिब्बत पनि विकासकै चरणमा छ । नेपालमा तिब्बत विकासको अनुभव अपरिहार्य छ । विकासमा सहकार्य गर्न तिब्बत सधैं तयार छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।